Iibinta Janaayo, si miyir leh uga faa'iidayso! | Bezzia
Iibinta Janaayo, si miyir leh uga faa'iidayso!
Maria vazquez | 09/01/2022 22:00 | Wararka
Jimcihii hore ee iibka January dhaqanka. Iibinta wax walbaa tilmaamayaan waxay wanaajin doonaan iibka marka loo eego ololaha iibka 2021 oo aan hubno in qaar badan oo idinka mid ah ay mar hore ku guul darrysteen, miyaynu khaldannahay?
Kuwo kale adiga oo aan si sax ah uga qaybgalin iibka waxaad ka faa'iidaysan doontaa qiimo dhimis weyn bilaha December iyo January. Waxayna tahay in maamul-daadejinta iibku ay tahay hab-dhaqan nagu soo biiray sannadihii u dambeeyay. Labaduba waa bedel weyn oo lagu helo badeecadaha aan u baahanahay qiimo aad u jaban, si kastaba ha ahaatee, wax walba ma socdaan!
Dukaamada ayaa marka hore ka faa'iidaysta baahida hadiyadaha kirismaska ​​​​kadibna waxay micidaan iibka taas si rasmi ah u bilaabma 7-da Janaayo, kadib maalintii boqorada. In kasta oo dukaamo badan ay bilaabaan inay kor u qaadaan qiimo dhimis usbuuc ka hor, tani wali waa taariikhda aan si rasmi ah uga hadli karno iibka.
1 Furayaasha si aad uga faa'iidaysato iibka
1.1 Ha ku bixin wax ka badan inta aad ku bixin karto.
1.2 Raac qiimayaasha si aad u kaydsato
1.3 Hubi shuruudaha wax iibsiga
1.4 Hayso tigidhka oo sheeg
Furayaasha si aad uga faa'iidaysato iibka
Maxayse yihiin furayaasha si aad uga faa'iidaysato iibka? Iibka ayaa ka badan 50% qiimo dhimis dukaamada qaarkood, sidaas darteed waa ay jiraan aad ugu haboon si aan u iibsano waxa aan runtii u baahanahay. Si kastaba ha ahaatee, qiimo-dhimisku maahan waa istaraatijiyad nagu dhiirigelinaysa inaan sii wadno wax iibsiga taas oo ay aad u fududahay in lagu dhaco. Iska ilaali oo runtii ka faa'iidayso iibka talooyinka soo socda.
Ha ku bixin wax ka badan inta aad ku bixin karto.
Iibka ayaa ah waqti ku habboon iibso adoon kharash badan ku bixin. Si kastaba ha noqotee, haddii aad u soo iibsatid shay gaar ah xaqiiqda ah in la dhimay, kaydka uu iibku ku imaan karo wuu dhammaan doonaa. Iyo sida looga fogaado?
liis samee ka hor waxa aad u baahan tahay.
Iyadoo la tixgelinayo liiskii hore, qiimaha aad ku bixin karto alaabtan iyo xaaladdaada dhaqaale u deji miisaaniyad oo ixtiraam.
Mudnaanta sii. Haddii miisaaniyadu kuu ogolayn inaad iibsato wax kasta oo aad rabto, sii mudnaanta waxa ugu muhiimsan.
Raac qiimayaasha si aad u kaydsato
Ma dhab ahaantii lacag ma kaydsanaysaa adigoo iibsanaya shay gaar ah oo iib ah? Xusuusnow alaabtaas la dhimay waa inay muujiyaan qiimahooda asalka ah ku xigta qiimo dhimista, ama si cad u muuji boqolleyda qiimo dhimista. Inkasta oo haddii aad runtii rabto inaad iibsato shay u taagan maalgashi aad u fiican, fikraddu waa bilo ka hor intaadan raacin maqaalka oo ogow sida qiimaha uu u kala duwan yahay si aad u ogaato haddii aad runtii bixinayso wax ka yar.
Hubi shuruudaha wax iibsiga
Xarumaha qaarkood shuruudaha iibsigu way kala duwanaan karaan xilliga iibka. Waxaa laga yaabaa in aysan aqbalin lacagaha kaararka deynta, u dejin shuruudo cusub oo isbeddel ah ama aysan aqbalin lacag celin. Way awoodaan, laakiin shuruudahaas waa in si cad loo sheego. Markaad shaki gasho, iska hubi!
Waxa aan la beddeli karin waa adeegga iibka ka dib iyo codsiga dammaanadda. Kuwaas, iyada oo aan loo eegin haddii aad iibsatay alaabta inta lagu jiro iibka ama ka baxsan muddadaas, waa inay isku mid noqdaan. Yaanay ku khiyaanayn!
Hayso tigidhka oo sheeg
Hayso tigidhka dhammaan iibsiyada aad sameyso haddii aad u baahato beddelaad, lacag celin ama aad fayl garaysato cabasho. Haddii aad rabto inaad bedesho ama soo celiso shay, ku hayso sanduuqa. Dhammaan xarumaha ma aha inay soo celiyaan lacagtaada, laakiin intooda badani waxay ku siinayaa suurtogalnimada inaad ku beddesho ama aad ku hesho cooshado qiimihiisu si aad hadhow ugu qarash gareeyso dukaanka laftiisa.
Macmiil ahaan inta lagu jiro iibka waxaad yeelan doontaa xuquuq la mid ah tan wakhti kasta oo kale oo sanadka ah. Haddii ay dhibaato jirto oo aan si nabad ah loo xalin, waxaad had iyo jeer yeelan doontaa ikhtiyaarka ah weydii xaashida sheegashada oo ka fiirso cabashadaada ama cabashadaada.
Ka dukaameysiga xarumaha aaminka ah Markaad raacdo talooyinkan waxaad awood u yeelan doontaa inaad ku raaxaysato iibka Janaayo si caafimaad leh, si caqli-gal ah wax u gadanaysa oo aanad ka shallayn ka dib markaad wax badan kharash garayso.
Wadada buuxda ee maqaalka: Bezzia » Wararka » Iibinta Janaayo, si miyir leh uga faa'iidayso!
Dhammaan faa'iidooyinka qoriga duugista
Faa'iidooyinka milixda badda u leedahay jirka iyo timaha
Ku biir Bezzia bilaash oo ka hel dhammaan waxyaabaha ku jira emailkaaga
Noqo nuqul qoraa